Sirdoonka Sweden oo isha ku haya xubno lagu tuhmayo Al-shabaab | Somaliska
Booliska Amaanka ee lagu magacaabo (Säpo) ayaa sheegay in ay isha ku hayaan xubno lagu tuhansanyahay in ay ka tirsanyihiin ama taageeraan xarakada Al-shabaab.
Säpo ayaa sheegtay in ilaa 30 qof ay u safreen Soomaaliya oo ay halkaasi ku soo qaateen tababar xaga dagaalka ah. Waxay sheegeen in ay siyaadiyeen kormeerka ay ku hayaan dadkaas ka dib markii Al-shabaab ay si rasmi ah ugu biirtay urur weynaha AlQaacida.
Waxaa qaasatan walwalka ugu weyn ku haya Säpo dadka u safray Soomaaliya ee dib u soo laabtay iyagoo ka cabsi qaba in dadkaas ay weeraro ka fuliyaan Sweden. Säpo ayaa sheegtay in Al-shabaab ay sidoo kale ku leeyihiin Sweden taageerayaal badan oo ka saacida xaga dhaqaalaha iyo warfaafinta.
Si kastaba ha ahaatee, Säpo ayaa aaminsan in ay aan lagu degdeg karin isbedalka uu keeni doono midowga Al-shabaab iyo Alqaacida balse ay hada isha ku hayaan dadkaas oo aysan wax talaabo ah qaadin. Waxay sheegeen in ay la socdaan xaalada shaqsiyaadka ay ka shakiyaan iyo sida uu isku badalo ficilkooda.
Hadaba dadoow ha laga digtoonaado arintaan. Hadal aan macno lahayn yuusan dhibaato kuu keenin. Waxaan kula dardaarmayaa akhristayaasha in ay iska ilaaliyaan fadhi ku diriryada aan macnaha lahayn. Mar haddii shaki ku soo galo way adkaanaysaa sidii aad uga bixi lahayd.
asc jimcaale ad ayaad u mahadsantahay maxayele waxa ugu ween waa fadhi kudirirka iyo hadalada maala yacniga marka ajar allaha kaa siiyo bararujinta ad ku bararujise shacabka somaliyeed
jimcaale , waaa ku mahadsanatahy bro , soomaali hadaan nahay ma naqaano danteena!!!
Run ahaantii Jimcaale waa Talo wanaagsan :- Ciddaana haddaa qoorta is gashataan kala bixi maydaan- lkn iyaguna %65 waa deg deg badanyihiin.
Oo wax xaqiiqda ka dheer yay dadka ku maagaan –
Oo hadda qof walboo Soomaaliya aada ma laga shakinaa , waaba yaabe.
hadii aad u dhaqanto sidii qof wanagsan oo anad ku lahayn marnaba wax lug ah dadkaas aafada ah, cidina kusoo donan mayso, lakiin hadaad tageerto hab dhaqaale amaba hab kale waxaad ogata in lagu hayo, sidaa awgeed kuwaas taagero af iyo taagero dhaqaale midna ma istaahilaan ee ka dheerada. magac diimed ayey ku qaraabtane.
February 28, 2012 at 16:25
Asc, waad ku mahadsan tahay talada wanagsan Qoraha . waana wax jira , laakin waxaa su,aal ah qofkii ka tirsan ama xumbinka ah Alshabaab oo nagu dhaxnool ama swedan dagan dadka reer swedan ee Somalida maxaa la gudboon ???????
March 1, 2012 at 22:39
webkii ugu horeeyay oo lacag lagu aqristo kan baa iigu horeeyay ilaah ha idiin sahlo dhaqaalo ileen dunida kama jiree web lacag lagu aqristo
Maxamed soo adiga hada akhristay bogga adiga oo aan lacag bixin? Midaas mahadsanid ma lihid miyaa.
Mida kale, wargeysyada sharafta leh ee caalamka oo dhan lacag ayaa lagu akhristaa balse waa websiteyada Soomaalida ee qashinka ah waxa bilaashka ah. Qofkii garanaya qiimaha iyo waxtarka boggaan 90kr oo 6 bilood ah qiima lama leh.
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk war anagaa bala aragnay somaliska waaba ka daray
Geeeeorge Afrax says:
@Zaki, walaal kaan su’aasha Qofna ugama jawaabin waxow yiri: “”su,aal ah qofkii ka tirsan ama xumbinka ah Alshabaab oo nagu dhaxnool ama swedan dagan dadka reer swedan ee Somalida maxaa la gudboon ??””
– kolleey waxeey ila tahay: in aad si deg deg ah ula Xiriirtaa booliska, ileen falkii xun oow geeysto soomaali o dhan oo sameeyn xun ku yeelan karaa yee! kheeyr sameeyntu waa in la Gacan geliyo, MAhad sanid.